क्षय को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
दन्त क्षय गरिब हुन्छ मौखिक स्वच्छता। प्लेग सुरक्षा कोटिंग दाँत - दांत सतह मा, यो तामचीनी गर्न क्षति पैदा, चीनी र स्टार्च को एसिड सिर्जना गर्न जीवाणुहरु फीड accumulates। को क्षति progresses गर्दा, दाँत बिस्तारै deteriorates र चाँडै यस्तो दाँतको दुखाइको, रूपमा समस्या छन् दुर्गंध, अत्यधिक संवेदनशीलता, गम रोग र दाँत पनि।
कसरी दाँत क्षय को छुटकारा प्राप्त गर्न? यसलाई केही सरल सुझाव फाइदा लिन पर्याप्त छ:
1 को मौखिक गुहा को fluoride उपचार कार्य गर्नुहोस्। Fluoride दाँत को स्वास्थ्य को लागि एक महत्वपूर्ण खनिज छ। यसलाई बलियो तामचीनी हुन मदत गर्छ र दाँत क्षय विरुद्ध सुरक्षा। Fluoride पनि दाँत गर्न क्षति उपचार मा मद्दत गर्छ। तपाईं दाँत मा एक गुहा गठन गर्न थाले याद भने, fluoride प्रारम्भिक उपचार आफ्नो तामचीनी को राज्य पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। कि fluoride gels, तरल समाधान वा Foams टूथपेस्ट र mouthwashes भन्दा प्रभावकारी याद गर्नुहोस्।
2. आफ्नो दाँत को क्षतिग्रस्त भाग को बहाली लागि दन्त चिकित्सक जानुहोस्। जब क्षय यसलाई आंशिक नाश र दन्त चिकित्सक एक विशेष समग्र सामाग्री संग दांत को मूल आकार पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। दांत को समाप्तिमा नयाँ प्रक्रिया रूपमा राम्रो देखिन्छ।
दांत धेरै नराम्ररी क्षतिग्रस्त छ भने3कसरी, दाँत क्षय को छुटकारा प्राप्त गर्न? यो एउटा मुकुट राख्न अर्थमा बनाउँछ। यो प्रक्रिया नष्ट दाँत र कमजोर अंश त्यसपछि बरतन को निर्वाचकगण मुकुट बदलिएको हुनेछ जो गर्न र वास्तविक दाँत उपस्थिति मा जस्तो हटाउन पनि समावेश छ। यो पनि सुन वा धातु को सकिँदैन।
त्यहाँ दुखाइ थियो4भने, यो एक मूल नहर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस मामला मा, दन्त चिकित्सक को decayed दांत को सँगै प्रभावित ताकत र भास्कुलर ऊतक संग भाग हटाउँदछ। त्यसपछि दूर भाग एक छाप बदलिएको छ। केही अवस्थामा, मुकुट बाहेक स्थापना गर्न आवश्यक छैन।
5 परम्परागत fillings गर्न पहिलो वैकल्पिक - जेल दांत को पुनर्जनन लागि - 2010 बाट अनुसन्धान र परीक्षण को प्रक्रिया मा छ। यो जेल सेल पुनर्जनन द्वारा दाँत निको, क्षय को उपचार मा ठूलो प्रतिज्ञा छ। बारेमा एक महिनाको लागि यो बढावा बहाली दन्त यसरी गुहा हटाउने, कक्षहरू। तर, यो विधि परीक्षण भइरहेको छ, त्यसैले चाँडै सबैलाई उपलब्ध छैन।
तीमध्ये कुनै पनि मदत गर्नेछ भने6कसरी, दाँत क्षय को छुटकारा प्राप्त गर्न? दांत हटाउन - मात्र एक तरिका हो। पछि यो खाली ठाउँ खाली सबै दाँत बीचको दूरी बढ्छ भन्ने तथ्यलाई योगदान किनभने एक दन्त प्रत्यारोपण भर्न हुनेछ।
दन्त चिकित्सक एक यात्रा बिना घरमा दाँत क्षय को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न?
दुर्भाग्यवश, दाँत मा एक गुहा को गठन प्रक्रिया पहिले नै शुरू भएको छ भने, दन्त उपचार बच्न काम गर्ने छैन। यो ढिलो यस गरेको छ - सबै राम्रो। तर गुहा बस गठन गर्न सुरु गरिएको छ भने, यो मूल्य निम्न प्रयास छ:
- प्रत्येक भोजन पछि साफ दाँत। दाँत क्षय र दन्त floss विरुद्ध यो विशेष टूथपेस्ट लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। बनाउन गुहा एक दांत कोट्याउने सिन्का कुनै खाना अवशेषहरु पक्का (हुन होसियार - यो धेरै सानो खाडल लागि मात्र हो) र दूध धेरै पिउन।
- दुइ पल्ट एक दिन, बेकिंग सोडा को एक समाधान संग आफ्नो मुख कुल्ला।
दन्त क्षय भएका लगभग सबै ती चीनी को अत्यधिक खपत सम्बन्धित केही खाने बानी छ। अध्ययन यसलाई को कारण अवस्थामा को 95% छ भनेर देखाउन आफ्नो दाँत समस्या! तपाईं आहार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने, क्षय रोक्छ र थप फैलियो गर्दैन, कुनै पनि रूप मा चीनी को प्रयोग इन्कार गर्न।
र सम्झना! दांत मा प्वाल गठन गरेको छ भने, यो एक्लै कहिल्यै जाने!
के भने दाँत मा चर्किएको थियो? कारण र उपचार
दाँत Whitening एयर प्रवाह - सुरक्षित र सस्तो प्रक्रिया
आधुनिक कोष्ठ प्रणाली को प्रमुख सुविधाहरू
तपाईं एक दाँतको दुखाइको छ भने
कसरी घर लोक उपचार मा दाँत को संवेदनशीलता हटाउन?
संलग्नहरू मा clasp कृत्रिम अंग: स्थापना लाभ समीक्षा
Nidoran (महिला): विवरण र विशेषताहरु Pokemon
एसपीए प्रक्रिया - यो ... हो यो सना मा स्पा उपचार: एक विवरण र समीक्षा प्रक्रियाहरु को सूची
एक "खुसी दुःख" के हो? कविता Marshak "घाटी को लिली" को व्याख्या
कसरी आफ्नै हातले एक प्रेम एक लागि एक आश्चर्य बनाउन
विद्युतीय कन्फिगरेसन - परमाणु संरचना को रहस्य
धमाकेदार zucchini र गाजर र प्याज: चार विकल्प पकाएको भोजन
आफैलाई बुनना: बालिका लागि टोपी crocheted
मस्कोमा विवाहको लागि भोजनालय। विवाहको लागि मास्कोमा सस्तो रेस्टुरेन्टहरू। एक विवाहको लागि मस्को रेस्टुरेन्टहरू
शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष अन्वेषण को समस्या: हाम्रो हातमा हाम्रो भविष्य
मद्दत योजना: कागज को एक Pokemon कसरी बनाउन
"ब्राजिल" नाइट क्लब। Koblevo